दिइएन क्यान्सरको खोप - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
२० वैशाख ०७६ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउँदा किशोरीहरू हर्षित भए।
राष्ट्रपतिले सरकारी नीति सार्वजनिक गरेको चार दिनपछि २४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भए। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।’
त्यो प्रतिबद्धता अहिलेसम्म अधुरै छ। ९ महिना बित्दासमेत सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुभूति खोप पर्खेर किशोरीले गर्न पाएका छैनन्। महिलाले स्तन क्यान्सरको निःशुुल्क परीक्षण गर्न पाएका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी एचपीभी भ्याक्सिन कार्यक्रम यस वर्ष कार्यान्वयन गर्न असम्भव रहेको बताउँछन्।
समयमै परीक्षण गर्न नपाउँदा पाठेघरको मुखको र स्तन क्यान्सरबाट बर्सेनी सयौं नेपाली महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। महिलामा हुने क्यान्सरमध्ये पाठेघरको मुखको र स्तन क्यान्सर क्रमशः पहिलो र दोस्रो पर्छन् ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण गर्ने विधि भिज्युअल इन्स्पेक्सन विथ एसिटिक एसिड (भीआईए)हो। न्यून खर्च र थोरै समयमै यस विधिबाट पाठेघरको मुखको क्यान्सर भए/नभएको जाँच गर्न सकिन्छ। कपासमा एसिटिक एसिड पाठेघरको मुखमा केही सेकेन्ड राखेर परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को विधि प्यापस्मेयर हो।
स्तन क्यान्सरको परीक्षण भने अल्ट्रासाउन्ड र म्यामोग्राफीबाट गर्न सकिन्छ। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपीभी) नै पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउने मुख्य कारक मानिन्छ। यसविरुद्धको एपीभी खोपको परीक्षण मुलुकका दुई जिल्लामा सरकारले गरिसकेको छ। ०७२ सालमा बालबालिकालाई एचपीभीविरुद्धको खोप परीक्षण गरेको थियो।
१० वर्ष उमेर समूहका १४ हजार बालिकालाई खोप लगाइएको थियो। द ग्लोबल एलाइन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन (गाभी)को सहयोगमा खोप लगाइएको हो। चितवन र कास्की जिल्लाका झन्डै १४ हजार बालबालिकामा खोप परीक्षण गरिएको थियो। ‘परीक्षणको नतिजा राम्रो देखिएको थियो। सामान्य ज्वरोबाहेक अन्य ठूलो साइड इफेक्ट देखिएन,’ स्त्री क्यान्सररोग विशेषज्ञ डा. जितेन्द्र परियारले भने।
स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप सेवा शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले एचपीभी भ्याक्सिन लगाउन तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। ‘पूर्वतयारी भइरहेको छ। यो वर्ष भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम अहिलेसम्म बनेको छैन,’ उनले भने। खोप परीक्षण गरिएका बालिकाहरूको अवस्था अनुगमन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘किशोरीलाई भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको छ।’ यो खोप किशोरी लक्षित छ। ९–२५ वर्षका किशोरी एवं युवतीले खोप लगाउने गरेका छन्। डा. परियारका अनुसार ४५ वर्ष उमेर समूहका अधवैंसे महिलाले पनि लगाउन सक्छन्।
नेपाल क्यान्सर केयर फाउन्डेसनका अध्यक्ष सुशीलकुमार पन्त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका आश्वासन कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद भएको बताउँछन्। ‘सार्वजनिक तवरबाट व्यक्त प्रतिबद्धता के के कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुरै नगरौं। के/के कार्यान्वयन भए भनेर कुशल प्रशासन सञ्चालकले खोज्नुपर्ने खाँचो छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका उनले भने।